Juventus oo dalab 43 milyan oo gini ah ka gudbinaysa weeraryahanka Kooxda Inter Milan ee Mauro Icardi – Gool FM
Ka Bogo kooxaha gaaray guulaha xiriirka ah ee ugu badan horyaalka Premier League… (Man City, Liverpool, Arsenal & Chelsea oo qeyb ka ah!)
Muxuu ka yiri tababare Solskjær barbarihii ay kula galeen Liverpool garoonka Old Trafford?
Man United oo Saddex rikoodh muhiim ah ka hor istaagtay Liverpool kaddib barbarihii ay ku galeen garoonka Old Trafford
Klopp oo ka hadlay dhacdada goolkii Rashford, Muxuuse ka yiri qaab ciyaareedka Man United?
Zidane oo si RASMI ah ugu dhawaaqay liiska xiddigaha Real Madrid ee ka qeyb galaya kulanka Galatasaray & Magacyada Shan ciyaaryahan oo ka maqan
Kooxaha Man United iyo Liverpool oo dhibacaha ku qeybsaday garoonka Old Trafford… + SAWIRRO
Shaxda rasmiga ah kulanka adag kooxaha Man United Iyo Liverpool ee horyaalka Premier League
Juventus oo dalab 43 milyan oo gini ah ka gudbinaysa weeraryahanka Kooxda Inter Milan ee Mauro Icardi
Haaruun April 3, 2019
(Turin) 03 Apriil 2019. Kooxda kubadda cagta Juventus ayaa la soo warinayaa inay kooxda ay ku xafiiltamaan horyaalka Serie A ee Inter Milan u gudbiso dalab 43 milyan oo gini ah si ay uga soo qataan Mauro Icardi.
Weeraryananka reer Argentine ayaa mustaqbalkiisa mugdi la galiyey isbuucyadii dhowaan, kaddib markii uu diiday inuu la tababarto kooxda markii uu qilaaf soo kala dhex-galay isaga iyo maamulka kooxda, iyadoo aan naadiga loo xulan tan iyo 9-kii bishii Febraayo.
Laacibkii hore ee Sampdoria ayaa waqtigiisa garoonka San Siro waxa ay u muuqataa inuu soo gabagaboobay, Warsidaha La Repubblica ayaana soo jeedinaya in Juventus ay diyaar u tahay inay dalab aad u fiican miiska u saaraan.
Juve ayaa la rajeynayaa sidoo kale inay Paulo Dybala u dirto dhinaca Inter heshiis isku bedelasho ah, laakiin xiddiga heerka caalami ee dalka Argentina Icardi ayaanan ku qanacsaneyn sheekadaas, sidaasi darteed Bianconeri ayaa ku dari doonta lacag kaash ah.
Cayaaraha da'yarta Olombikada Zone 5 oo furmay iyo Soomaaliya oo ka qeyb galaysa
Manchester United oo bartilmaameed ka dhigatay laacib khad dhexe oo ka ciyaara horyaalka Premier League